Ngokuqhelekileyo, yonke iminyaka inyoka inzima. Ngoko lo nyaka uthembisa ukuba nzima. Kwaye ukuba wenze indawo yeNyoka, sele isele emnyango, okokuqala ngaphambi koNyaka omtsha, kucetyiswa ukuba uhlolisise imihlobiso yangaphakathi yonyaka onguNyaka omtsha, iinqwelo zeholide yakho kwaye, ngokuqinisekileyo, imenyu.
Ukubaluleka kwenyaniso yokuba inyoka ayithandi ukukhawuleza nokuxabana, ayiyithandi ingxolo engaphezulu. Ngoko ke, uludwe lwamamemela kufuneka lucatshangelwe kwangaphambili, kwaye uzame ukwenza itheyibhile yokutya ngaphandle kokudibana kunye nelo lungiselelo, ukuze ungacasuli umnini wonyaka ozayo. Njengabalingisi beenkwenkwezi, ukubhiyozela uNyaka omtsha ngeenkampani ezilungileyo, ukuba ziquka kuphela abahlobo abasondeleyo nabazinikeleyo. Kubalulekile ukukhusela iintlanganiso ezinkulu kunye nengxolo yabasemzini. U-Eva onguNyaka omtsha kufuneka ubanjwe ekudakaleni nasekukhunjweni okunzima, kufuneka ndijikeleze abantu abasondeleyo nabathandekayo, ngoko ke, njengokuba kunjalo, ndivulele iziganeko ezintsha kunye nemihlali. Kwaye ngexesha lokulwa ne-chimes kufuneka wenze isifiso, nto ebaluleke kakhulu ebomini bakho, kwaye kubaluleke kakhulu - ukukholelwa ekusebenzisweni kwayo.
Itheyibhile yokuzonwabisa 2013
Amanzi, nangona amnyama, akahambelani nemifuno yemifuno, ezininzi izitya kwiitheyibhi yokutya kufuneka zibe yinyama. Kodwa akukho mntu wanciphisa i-salads eyintandokazi, njengemigca yokutya izitya. Isitya esikhulu kwisitya sesidlo kufuneka ukuba, ngokwenene, inyama, okanye kunoko, izitya ezenziwe kuyo, ukukhupha kwentaka okanye umvundla. Lungisa le izitya ngeendlela ezahlukeneyo, konke kuxhomekeke kwintsikelelo yakho, oko kukuthi, unokwenza utywala, uphume, upheke, kunye ne-stew. Kanti ke itafile yeholide kufuneka ukuba ikhona intlanzi, ethanda kakhulu inyoka yamanzi. Ukuba ungumgourmet, ngoko unokubonisa ukuqala kwaye usebenze imilenze ethosiweyo.
Kuninzi okunqwenelekayo ngenxa yobuninzi bezinto eziphilayo, kuba inyoka kufuneka iqhubekele ukufihla. Ngokuphathelele ukutya okuninzi, banendawo enkulu yokunikezelwa ngamaqanda abilisiwe. Ikholam kufuneka ibe yinto enhle kunokwenzeka, kwaye kwinqanaba layo kucetyiswa ukuba kulungiswe i-vasus kunye necandelo lepine, elingasempuma libhekiswa njengeliso lwexesha elide eliyimpumelelo.
Inyoka inomdla iya kuba yinto emnandi, ukuba kwitafile yakho yokutya kuya kuba nobuninzi beentlobo ezahlukeneyo zokubukela. Nangona kunjalo, simele sikhumbule ukuba iNyoka iyaqiqa, kwaye ihlala ikhetha yona into ehambelana nobukhulu bomzimba wakhe. Oku kulandela ukuba simele silinganise iimfuno zethu kwaye sizame ukungadli ngokugqithiseleyo ngalobo busuku, simele siphumelele izidlo ezinomdla ngokuzonwabisa, kunye nokuzonwabisa.
Ukubhiyozela iholide kufuneka ucinge ngako konke oza kuwugubungela itafula lokutya ngaphandle kokulibala le nto ebalulekileyo kamva, ukukhawuleza ujikeleze iincwadi zokupheka okanye ukhangele into ethile yangaphambili kumaphepha e-Intanethi. Imenyu kufuneka icwangciswe kwangaphambili ukuze ukwazi ukuthenga zonke iimveliso eziyimfuneko. Kakade, kuya kuba yintsusa, ukuba kukho ezinye izitya ezingezizo zendabuko etafileni onokumangaliswa yiNyoka kunye nabathandekayo bakho.
Imenyu Yonyaka omtsha
Inyoka ingumlondolozo, kwaye inyanzela ukuba ungenise kwitafile zonke izinto abantu bakho abathandayo. Oku kuthetha ukuba nangona ucinga ukuba i-vegetable stew okanye i-purekak ayikho kwindawo etafileni, kodwa amalungu omndeni wakho ayayithanda kakhulu, musa ukuwachitha loo nto. I-Saladi i-Olivier, okanye i-herring phantsi kweengubo zoboya, okanye intlanzi, esele ibe yinto yamathala eNtsha kaNyaka, kufuneka, njengokuba ihlala njalo etafileni. Kwaye ngokubanzi, ngokubanzi, itafile kufuneka ilandeleke kwiindidi. Inyoka ngumthandi omkhulu kakhulu kwiiqanda, kodwa kuyimfuneko ukubeka itafile kunye nezitya eziza kugxininisa ubuchule bokutya kunye ne-confectionery ye-hostess ekhaya.
Kungenzeka ukuba utywala okanye is sandwiches ubeka endaweni yesitya esikhulu, esiza kubeka iintlobo zeefake kunye neesekese. Okanye mhlawumbi kuya kuba, kwakhona, isidlo apho uhlala kwindawo ekuhlala kuyo ebomvu kunye ne-caviar emnyama, isitshalo seqanda kunye namantonga kunye neminqumo. Ngendlela, i-herring podshuboy ingaba neyona ntlanzi kwitheyibhi yokuzonwabisa, ukuba inika inyoka inqabisa phezulu kunye nemigca yemigodi yeminquma, iminquma kunye ne-anyanisi. Iifom zinokuba nekhekhe, i-pie inyama kunye nomqulu.
Ngokuqinisekileyo, loo Nyoka iyakuthanda ukudla umvundla, ukulungiswa kwayo kufuneka ibe yintlandlolo, ukwenzela ukuba wenze umncedisi we-podhalimazh we-2013 goda. Kuza kulungele ukuthetha ngeziqholo omele ukhethe kwizinyoka. Izitya kufuneka zikhuphe amakha ephunga elimnandi kunye ne-clove, i-sinamoni kunye ne-icardamon, i-basil kunye ne-ginger, kunye ne-nutmeg.
Iziphuzo zetafile yonyaka omtsha
Ukufumana ukumodareyitha kunye nokuthintela, Inyoka ayisayi kuvuma, ukuba uvuke ixesha elide ukulungisa iziphuzo. Ngokungathandabuzekiyo, isiselo sonyaka omtsha seNtshonalanga, esi si-champagne, apho kufuneka khona, njengesiqhelo, ukuqala isilwanyana sokuqala. Siyazi ukuba ukusela yokuqala yeglasi ye-champagne ukulwa ne-chimes, ngokuqinisekileyo kufuneka wenze umnqweno onqwenelayo. Emva koko, utywala obuthathaka kunokuthatha indawo ye-champagne, umzekelo, iwayini elimnandi okanye i-cocktail engavamile. Kodwa yonke into ifanele ibe yi-moderation. Ukungaphuzi abantu kunye nabantwana kuyimfuneko ukuba banambise i-milkshake.
Ukubhaliswa kwetafile yonyaka omtsha
Ufuna ukuhlobisa itheyibhile yokutya, zama ukucinga kwangaphambili malunga nokuthengwa kwesebe lepine. Kodwa akukho konke. Lungiselela ikhandlela ezintle kunye neziqhumiso, imihlobiso eyenziwa ngamathanga. Cinga ngomhlobiso omhle, musa ukulibala ukuba kufuneka abe mnyama kunye nohlaza okwesibhakabhaka kulo nyaka ozayo, kodwa imibala eluhlaza okwamkelekileyo iyamkeleka. Kunokwenzeka ukubeka itafile i-sinyesalfetki okanye umhlophe kuphela, kodwa okokuba imidwebo eluhlaza okwesibhakabhaka. Indwangu yecala kufuneka ibe ngumbala wolwandle okanye, ukuba imhlophe, imele ilandele i-pattern of seascape.
Njengoko umhlobiso oyintloko wetafile kufuneka ube ngowona mkhulukazi wetafile ngumfanekiso wentlanzi yamanzi amnyama, okubhekwa njengophawu lokuza kwe-2013goda. Beka okuyimfuneko phakathi kwezidlo ezincoko kakhulu.
Indlela yokukhetha i-decanter yewayini?
Indlela yokususa i-super glue kwiingubo
Indlela yokukhetha ipake yefry kunye neengubo ezingenanto
Indlela yokuhlamba isibuko ngaphandle kokuqhawula
Ubuqhetseba ebomini bethu
Isobho somsi nge pasta
Indlela yokubeka umntwana ukuba alale?
Isobho seTatato kunye nomhluzi wenkukhu
Isitayela se-Eco ngaphakathi
Ukuphononongwa kwefilimu ethi "Random Husband"
Ukubetha kweso kwintsimo ye-autumn yohlobo lwe-autumn ka-2016
Ukupheka kweitya zokutya zaseRashiya
Ibindi kunye namazambane ebhodweni
Ukupheliswa kweengxaki zesikhumba
Isaladi ye-beet, isipinashi kunye namakhowe
I-Recipe ye-pizza yaseNtaliyane
Iigonya: inyaniso kunye nemiphumo yokugonywa
Terrine kunye nenkukhu